Maxay ka wada hadleen Farmaajo iyo RW Rooble? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay ka wada hadleen Farmaajo iyo RW Rooble?
Kulankan ayaa looga hadlay khilaafka Farmaajo iyo Rooble ee salka ku haya xilka qaadistii Agaasimaha Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxaa soo idlaaday kulan dhawaan dhex maray Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, iyo Madaxweynihii muddadu ka dhamaatay Maxamed Cabdullahi Farmaajo, kaas oo ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka mid ah taliyayaasha ciidanka iyo Guddoonka Baarlamaankii 10-aad ee waqtigiisu dhamaaday.
Sida aan hore u baahinnay Farmaajo, oo xaqiiqsaday in waayihiisii siyaasadda ee indha-sarcaadka ku dhisnaa soo idlaadeen, ayaa koox u dhow xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha ka codsaday in la heshiisiiyo Rooble, waan-waan xalay soo billaabatay ayaana sabab u noqotay in ay maanta kulmaan labada daraf.
Ujeedka kulana dhex maray labada dhinac, ayaa ahaa in xal loo helo khilaafka ka dhex aloosan xaafiisyada, kaas oo sababay xasarad siyaasadeed oo xooggan, kadib markii uu Ra’iisul Wasaare Rooble, xilkii ka raacdeeyay Agaasimihii NISA, Fahad Yaasiin.
Sida ay sheegayaan xogo hoose, labada dhinac ayaa isku af-gartay in Farmaajo aqbalo xilka ka xayuubinta Fahad Yasiin, hayeeshee, Madaxweynihii muddadu ka dhamaatay ayaa ka hor yimid maxakamadeynta taliyihii hore ee NISA, taas oo uu ku adkeystay RW Rooble.
Sidoo kale, waxaa jira warar sheegaya in Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta Rooble, uusan wax dhib ah ku qabin in laga laabto magacaabidii KMG ahayd ee Bashiir Goobe, isla-markaana uu Farmaajo magacaabo Agaasimaha Hay’adda NISA, qaab ku meel gaar ah, iyadoo labada dhinac isla oggol yihiin.
Sida ay carabaabayaan xogaha qaar, Farmaajo, ayaa sidoo kale ka sheegay shirka inuu dhawaan iclaamin doono kulanka Golaha Amniga, halkaas oo Fahad uu ku soo bandhigi doono xogaha la xariira kiiska Ikraan ee Kooxda Farmaajo doonayaan in ay ku marin habaabiyaan ariinkaan indhaha laguu wada haayo, maalmo kadibna uu Fahad is casilo doono. (Xogtaas ma xaqiijin karto Keydmedia Online).
Shacabka Soomaaliyeed, ayaa si weyn ugu garab istaagay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Rooble, go’aankii uu shaqada uga buriyay Fahad Yaasiin, waxaana looga fadhiyaan inuu jidka cadaaladda marsiiyo kiiska Ikraan Tahliil Faarax.